तिथि मेरो पत्रु » तपाईं Dateable हुनुहुन्छ?
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: जुन. 28 2020 |3मिनेट पढ्न
तरिका को एक सूची थोडा राम्रो आफैलाई चिन्न, तपाईं "एक lotta बिट" बढी dateable बनाउने
धेरै मानिसहरू आफ्नो डेटिङ जीवनमा बनाउन गल्ती गर्ने को एक राम्रो विचार भएको छैन तिनीहरूले, आफूलाई, हो. यो counterintuitive लाग्न सक्छ, तर तपाईं सक्रिय एक साथी पाउन प्रयास गर्दा सबै भन्दा राम्रो समय को एक आफैलाई ध्यान छ र के तपाईं बनाउँछ “किर्नाले”. महिला, मानिसहरू भन्दा बढी, गरिरहन “म जो पनि तपाईं जस्तै चाहनुहुन्छ”-सिंड्रोम (शायद कारण महिला लचिलो हुन मानिएको सांस्कृतिक अपेक्षालाई सुस्त गर्न, आफ्नै हित कमी अनाकार व्यक्तिहरूलाई), अन्तमा सबै भन्दा राम्रो मा एक असंतोषजनक र unfulfilling सम्बन्ध मा परिणत; र आश्चर्य, भएको अन्य व्यक्तिको समय र रिस बर्बाद “परिवर्तन”, खराब मा.
मेरो मनपर्ने भनाइहरूको एक यो जस्तै केहि जान्छ–अरु कसैले मानिन्छ कसरी थाहा र तपाईं प्रेम गर्न, तपाईंलाई थाहा छ र तपाईं प्रेम छैन भने? आफैलाई थाह लगानी तपाईं तालिका के ल्याउन ठीक थाहा गर्न अनुमति दिन्छ, र तपाईं र तपाईंको दाहिने एक अर्कालाई चिन्न र आफ्नो कम्पनी परिवर्तन गर्न गइरहेका छैनन् गुणहरू वा वर्ष संग आकर्षित गर्न सजिलो बनाउँछ.
Shel Silverstein आफ्नो कविता लेख्छन् रूपमा, “मास्क”:
त्यो नीलो छाला थियो
अनि त त्यो गरे
उहाँले यो लुकेको राखिएको
अनि त त्यो थियो
तिनीहरूले निलो लागि खोजी
माध्यम तिनीहरूको सम्पूर्ण जीवन
त्यसपछि सही पारित–
अनि थाह कहिल्यै
यहाँ चिन्न केही तरिका हो र तपाईं प्रेम, अरू कुनै सकोस् भनेर, पनि!
1. आफूलाई बाहिर ले
यो एक विभिन्न र असंख्य यताउता फेंक छ “आत्म-मदत” गुरु, पुस्तकहरू, र महिला समूह. मान्छे सामान्यतया खाने मामलामा यो सोच्न, तपाईं अघि मात्र सार्वजनिक मा dined छैन भने जो intimidating र अप्ठ्यारो हुन सक्छ. त्यसैले यसलाई कुनै पनि महत्वपूर्ण outing हुन सक्छ, लामो समय यो मजा छ र केहि तपाईं आनन्द उठाउन रूपमा–एक चलचित्र (रोशनी तल जाने एक पटक, कसैले जो एक्लै बस्नुभएको छ केन्द्रित छ), एक बल खेल, या शायद एक दिन यात्रा कहीं नयाँ.
2. तपाईं आज के गर्न चाहन्छौ?
केही समय छ? एक मिनेट लागि बन्द र blatantly दायाँ र तपाईं खुसी के आफैलाई सोध्नुहोस्–र त यो के जाने! यो जीवनको हल्ला बाहिर धुन गर्न सबैभन्दा सरल र प्रभावकारी तरिका को छ र फेसबुक वा टेलिभिजन मा चूसा भएर समय बर्बाद रोक्न. यो पनि धेरै अनियमित सम्म तपाईं खोल्छ, जादुई twists र पालैपालो, र तपाईं भन्दा धेरै मान्छे भनेर बैठक, विचारै र बेहोश अवस्थामा समय हत्या. प्रक्रिया मा, तपाईं आनन्दित हुन साथ कुनै आवश्यकता छैन कि तपाईं खोज गर्नेछन्–तपाईं आफ्नो छनौट अर्थपूर्ण भएर खुसी र विलासी हुन सक्छ.
3. तपाईंको मित्र सोध्न
यो मान्छे सोधेर लोकप्रिय फेसबुक क्रियाकलाप विस्तार को खालको पोस्टर वर्णन शब्द संग पोस्ट गर्न टिप्पणी छ. तर तपाईं सिक्न सक्छन्, वा कम से कम सार्वजनिक बारेमा कल्पना र आफ्नो छाप, आफ्नो मित्र सोधेर द्वारा तिनीहरूले तपाईंलाई वर्णन कसरी. यो उजाला गर्न मदत गर्नेछ “तपाईं” तपाईं संसारमा प्रस्तुत गर्दै छन्, र त्यसैले मिति. शायद, र सबै भन्दा अधिक संभावना, यो तपाईंको साँचो आत्म के तपाईं विश्वास संग मेल खाने. तर तपाईं अनजानमा तपाईंलाई थाहा के भन्दा फरक चरित्र भएको कथित छ भने तपाईं बारेमा सत्य हो–यस असफल श्रृङ्खला रूपमा प्रकट हुन सक्छ, भ्रामक सम्बन्ध.
4. नयाँ कुराहरू प्रयास
यो उल्टो को प्रकारको छ #2. बरु कुरा आफैलाई उपचार को के तपाईंलाई थाहा छ तपाईं गरिरहेको रुचि छौँ, पूर्ण रूपमा नयाँ कुरा गर्न! एक घोडा पहिले कहिल्यै ridden? सजिलो निशान सवारी प्रदान एक कम्पनी फेला. म तपाईं को बन्द प्यान्ट डर कुनै कुरा छैन गरिरहेको अधिवक्ता थियो, किनभने–कि तिथिहरु आकर्षित सक्छ जबकि–डर एक नयाँ अनुभव रमाइलो गर्न सक्षम हुँदा अलमल्याउन सक्छ. दिनको अन्त्यमा, तपाईं र तपाईंको हित परिभाषित मदत गर्छ भनेर अर्को जीवन अनुभव छुट्टयाएर हुनेछ, र तपाईं तालिका ल्याउन अर्को सीप र कुराकानी बिन्दु हुन सक्छ.
आत्म एक विश्वस्त अर्थमा राख्दा आकर्षक छ. स्वयं आफ्नो अर्थमा खेती गरेर, तपाईं अझ बढी आनन्दित हुनेछ, बढी व्यक्ति पूरा र तपाईं एक सम्बन्ध प्रस्ताव गर्न भनेर धेरै अधिक हुनेछ; र त्यतिन्जेल, के तपाईं सबै कुरा हो भन्ने तपाईंलाई थाहा रही धेरै मजा छ छौँ.